Ukuxinezeleka. Wonke umntu uqhelana nalo rhulumente kungekhona ngetyala. Uxinzelelo luyinto eqhelekileyo ebomini bethu. Uvela phi? Kuphi na ukudandatheka kunye nokulala? Zininzi izizathu. Uthando olutsha olungabonakaliyo okanye isifo esingenakunyangalekayo, ukungasebenzi okanye ukulimala okunxulumene nomsebenzi, ukufa komntu othandekayo kunye nayiphi na imeko yezenhlalakahle - uluhlu alupheliyo. Zonke ezi ntlupheko zinento efanayo. Iziganeko ezinxulumene neemvakalelo okanye iinkumbulo ezimbi zikhokelela kwimimoya emibi kunye nokwesaba. Ezo zinto, zenza ukuba neentloni zenzeke ngakumbi kwaye ziphelise inkqubo ye-nervous. Ukusuka apha ukuya kukudandatheka - esinye isinyathelo esincinane.
Ukuxinezeleka, ukudandatheka, ukulala - zonke ezi zinto ziyiziphazamiso eziphazamisayo ezifunekayo. Njengoko kwaziwa, ngenxa yokuba "amathambo" umntu unokuhlakulela izifo ezahlukahlukeneyo eziyingozi, ngoko ke wonke umntu kufuneka azi ukuba yeyiphi indlela efanelekileyo yokuphatha iingxaki zeentlanzi.
Impembelelo efanelekileyo kwi-psyche yomntu onentloni yenza ingqalelo yabathandekayo, ilizwi elihle lathi ngexesha, imigaqo yonyango. Kodwa akusoloko kunokwenzeka ukufumana isigulane singakhathazeki nangaphandle kwezi meko. Apha ungabhekisela kwingcebiso yamayeza emveli.
Uninzi lwezakhono ezininzi zibonisa ukufumana umntu kwiimeko ezixinzeleleyo, xa enza umsebenzi oxanduva. Oku kubangelwa imbandezelo yeentlungu. Uxinzelelo olunomdla luyakwenzeka ngexesha lokudityaniswa kwempahla, ukuqhutyelwa koqhagamshelwano olunzima, ukudilika. Amayeza, asekelwe kwikhalendula, i-chamomile, i-mint, amajikijolo e-black currant, aya kunciphisa imeko. I-calendula, umzekelo, ilwa neentloko kwaye ikhuthaza ukusebenza okuphezulu. I-Tincture ilungiselelwe ukusuka kwizipuni ezine ze-calendula kunye ne-200 ml ye-40% yotywala. Yigcine iiveki ezimbini kwindawo emnyama. Emva koko amaconsi angama-30 e-tincture ahlambulukileyo kufuneka ahlanjululwe kwi-50 g yamanzi abilisiwe kwaye athathwe isigxina seyure ngaphambi kokuba adle kathathu ngosuku.
Ukuba inkqubo ye-nervous iphelile, unokunciphisa imenyu yemihla ngemihla nge-celery, i-hazelnut, ingqolowa. Ukususela kwimbombo ungabilisa i-porridge okanye uyidle ibilisiwe. Kwimifuno eboniswe ukunyuswa kwamathambo - kuphucula imetabolism, izandla ziyayeka ukuzamazama, kwaye umsebenzi wesondo uqhelekile. Ukunyuka kweepuniwe ezi-3 ze-sage, ½ indebe yamanzi abilayo kunye noshukela ulungiselelwe. Unyanzela imizuzu eyi-15. Isetyenziselwa i-½ indebe ngaphambi kokutya, ama-3 ukuya kwezi-4 ngezihlandlo ngosuku.
Amakhono engqondo aqinisa ama-apricot, ama-walnuts, u-honey, imbewu, i-cranberries, isipinashi, ii-apula, iibhoksi, iikomkom.
Iikhumbuzo ezinzima, ngokuqhelekileyo ukutyelela umntu, ukuchaphazela kakubi ingqondo yakhe. Sebenzisa umama. 1 inkomishi ebilisayo yamanzi ama-15 amagremu weengcambu ukugxininisa isiqingatha seyure, ngoko ke. Sebenzisa ama-3-5 amaxesha ngosuku malunga nesiqingatha seyure ngaphambi kokutya 1 isipuni.
Ukuba ukhanyisa isibane sevumba ngevumba lamaqabunga e-lavender eqokelelwe phambi kokuvuna kwe sityalo, ke iimvakalelo zenzeke.
Ukunciphisa imvakalelo embi kunokuba isisombululo sabantu, njengokwenziwa kwe-pharmacy ye-chamomile. Ukusebenzisa i-chamomile iintyatyambo kunye no-40% utywala ngo-1:10 isilinganiso, gcina iveki ebumnyameni nokufudumele. I-tincture ephucukileyo ithatha ukuthatha, ihlanjwe ngamanzi, i-20-30 yehla kathathu ngosuku.
Ukuqinisekiswa ngamandla abo, umntu ucebise ukuba aphuze itiye e-oregano. Iingqayi ezine zeeterms - 1 ilitha yamanzi abilayo. Yidla 1 iglasi ngeli-4 ngosuku.
Ukukhupha i-disorder ye-nervous, njengobunzima, kuya kunceda i-linden, i-mint, i-hops, i-lily ye-valley, i-pumpkin, i-turnips nabanye abaninzi. Ukuxutywa kweentyantyambo ze-linden ngaphezu kokuphucula ubuthongo kunye nokuthintela ingxaki, kuyanciphisa ukuphindwa kwexesha. Yilungiselelwe ukusuka kwiipuniwe ezi-3 eziqwengwe ngeentyantyambo ze-linden kunye neglasi yamanzi abilayo, ukufudumala imizuzu eyi-15 phezu kobushushu obuphantsi. Ukufudumala okufudumele kokusela u-½ indebe kathathu ngosuku emva kokutya.
Ukuxinezeleka kunzima ukulwa. Le yimeko yokungabandakanyeki ebomini ngokugqithisileyo. Ngaphandle kwesibhedlele akunako ukwenza. Kodwa ukuncedisa kunyango oluphambili kunokungeniswa kunye nezilwanyana ezimbalwa. Ukunyanga olu hlobo lweengxaki zeentlanzi, i-honey, i-parsnip, i-jam kwi-petals ye-roses ilungile. Kwi-infusions, i-balm iyasebenza - i-grams ayi-15 nganye kwikomityhi yamanzi abilayo, nika 1 isipuni 1 amaxesha 3-4 ngosuku.
Izizathu ezinhlanu zokugqoka isitya esinomthi
Iipropati ezisebenzayo ze-crayfish
Indlela yokuzalisa amandla kwaye uhlale unamandla kwaye usebenza
Izifo zoLuntu kwiZifo eziMnyuba
Xa lonke ihlobo elifanayo liya kufika eMoscow kunye neRashiya ephakathi: Iingqapheli zengxelo yezulu
Abafazi abakhulelweyo balungiselela ukuzala
Inkukhu yokugaya kwi jelly
I-truffle ye-tshufle kunye nesinamoni kunye nekhofi
Zingaphi iikhalori zitshiswa ngexesha lokukhwela?
Ice cream nge-gooseberry
Inkcazo yabantwana kunye nabantu abadala: senza iPoster yonyaka omtsha
Amaqebelengwane amnyama namhlophe
I-Kanye West idlwengula ingxelo ye-scandalous
Iinqwelo kunye ne-salmon kunye noshizi
Ukunyuka kweenwele entloko: intloko yenkqubo, inzuzo kunye nokungalunganga
I-Jam ne-rhubarb ene-orange kunye nemon, ibhanana kunye nama-strawberries-zokupheka kunye nezithombe kunye namavidiyo
Indlela yokukhulisa iphambili
Ukulinganiswa kweefilimu ezibuhlungu kakhulu